Nagarik Shukrabar - मनको बह
बुधबार, १५ साउन २०७६, ११ : ४५ | शुक्रवार
मलाई जिन्दगीले धेरै ठग्यो। समय र परिस्थितिले साथ नदिएको एक बेरोजगार युवा हुँ म। जसको कुनै काम अहिले सम्म सफल भाको छैन। विदेश गैयो, पैसा डुबाएर आइयो। केही गरौँ भनेर आँट्यो, कहिले के नपुग्ने कहिले के नपुग्ने ! सबैतिर लथालिङ्ग भएको छ। मेरी प्रेमिका पनि छिन् तर उनी अलि भिन्न खाल्की छिन्।
पहिला त ठीकै थिइन् तर अहिले पूरै परिवर्तन भएकी छिन्। किन परिवर्तन भइन् भनेर मैले बुझ्न सकिरहेको छैन। बिग्रिएको मेरो व्यवहारले मलाई परिवर्तन गरायो या उनलाई ? पहिले जसरी मायालु तरिकाले बोलेजस्तो लाग्दैन। मेरो कुरा ध्यान दिएर सुन्ने उनी हिजोआज झर्काे मानेजस्तो लाग्छ। मुखले त केही भन्दिनन् तर बेवास्ता गरेजस्तो महसुस गर्छु।
खासमा अहिले मेरो परिस्थिति साह्रै नाजुक छ। म सबै कुराले डिप्रेसनमा गैसकेको छु। व्यवहार बिग्रेका कारणले होला, मेरो मनको बह पोख्ने साथीहरु पनि कोही छैनन्। भएकाहरुसँग पनि खुलेर कुरा गर्न सक्दिनँ। म बिल्कुल एक्लो छु।
मलाई पनि मेरो कुरा सुन्दिने कोही साथी भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। मेरो कुरा सुन्दिए मात्रै पनि मेरो पीर आधा हलुका हुने थियो। वास्तवमा भन्ने हो भने म हिजोआज मनभरिको कुरा सुन्ने साथीको खोजीमा छु।
स्रोत : नेप्लिज टिनेजर्स कन्फेसन